Kuo, dzokera kumutoro uye panguva ino neiyo mini mini | IPhone nhau
Runyerekupe nezve zvitsva zveApple zvigadzirwa zvinoramba zvichiuya kubva kuMing-Chi Kuo. Uyu anozivikanwa Apple muongorori anotsanangura mune dzichangoburwa runyerekupe rwekuti Cupertino firm ine pfungwa yekuburitsa nyowani iPad mini modhi yechipiri chikamu chegore rino.
Sezvo isu tese tichiziva, iyo Cupertino yakasimba yakavhura iyo nyowani iPad Pro mamodheru uno apfuura Kubvumbi, asi yakasiya parutivi mamwe ese maPad mhando saka hazvingashamise kana pakati peichi chakafanana 2021 ichatanga nhevedzano yezvigadzirwa pakati payo iri diki reiyo iPad.
Zvirokwazvo Vazhinji vashandisi havawani ino diki iPad inobatsira, asi kune vamwe vazhinji vanoita Sezvo neiyo iPhone, iwo madiki mamodheru anowanzo kuve akabudirira pakati pevashandisi, saka hazvingashamise kana iyo femu yakatanga iyi nyowani iPad mini kupera kwegore.
Zvinogoneka kuti dhizaini yeiyi nyowani iPad mini modhi yakafanana netambo yeiyo nyowani iPad Pro yakatangwa neApple uye mutsetse weiyo iPhone, iine mafuremu akatwasuka uye pamwe ne 8,4 inch screen sezvakatsanangurwa nemuongorori. Mune ino kesi, iyo nyowani iPad mini yaisazowedzera yakajairwa bhatani bhatani pazasi, zvinotarisirwa kuti ichawedzera iyo imwecheteyo sisitimu inowanikwa muiyo iPad Mhepo, ndokuti, diki bhatani iro rinoshandawo semasimba zvakare sekuvhura.
Parizvino iPad mini mamodheru anotanga pa € ​​449 yeiyo 64 GB modhi uye 619 yeiyo 256 GB yekuchengetedza modhi. Zvichava zvinodikanwa kuti uone kana aya makuhwa ari echokwadi, netariro zvakadaro, sezvo zvigadzirwa zvakawanda zvatinazvo, zviri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Kuo, dzokera kunochaja uye ino nguva neiyo mini mini